Zvinoenderana neBloomberg, kushomeka kwezvinhu zvinokanganisa chikamu chinofanirwa kuve rekodhi yeApple | IPhone nhau
Maka Gurman weBloomberg, inoratidza mushumo wayo uchangoburwa wekuti Apple inogona kuve nekota yakaoma kunzwisisa nekuda kwekushomeka kwemidziyo, uchifunga kuti iyi inogara iri nguva yakanakisa yekutengesa yekambani.
Ichokwadi chose kuti mwedzi mitatu yekupedzisira yegore yeApple uye yemakambani mazhinji inowanzove yakasimba. Mune ino kesi, Apple zvakare inopa yavo yekumusoro zvishandiso munaGunyana, saka hafu yechipiri yegore yakakosha. Parizvino uye maererano naGurman, kushomeka kwechigadzirwa kunotyisidzira mwaka wehoridhe weApple uyo unofanirwa kuve unorekodha.
Chirevo che Bloomberg inoratidza kuti mazuva mashoma mushure mekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone 13 ivo vakatanga kudzikira uye kuverenga hakuwedzeri zvakawanda panguva ino, tichifunga kuti mwedzi wapfuura kubva pachiitiko ichi. Iyo domino mhedzisiro iri kunyeverwa naGurman nevamwe vaongorori, uye kuti kushomeka kwemasheya chinhu chatinoona chichiitikawo neMacBook Pro ichangoburwa iyo Apple Watch nyowani kana yechizvarwa chechi11 iPad nePad mini, asi zvakare nemidziyo yekare mukabhuku kayo senge iyo iPhone 12, iPhone 24 kana XNUMX-inch iMac.
Tsamba yakaburitswa mune ino svikiro zvakare inoratidza kuti zvimwe zvinhu zvemidziyo yayo zvinonyanya kunetsa kuwana, kusanganisira machipisi kubva kuBroadcom neTexas Instruments. Izvi zvinoita kuti kudiwa kupfuure kupihwa Uyezve pane kutumira kunonoka uye matambudziko panguva iyo yekutenga zororo iri padyo nekona.
Kune rimwe divi kune yechitatu chizvarwa AirPods, iyo HomePod mini, AirTags kana kunyangwe iyo Apple TV iyo ivo vane yakawanda stock uye vakagadzirira kune ingangoita pakarepo kutumira. Izvi zvigadzirwa zvinogona kuve zvidimbu zvakakosha kune avo vari kutsvaga Cupertino siginecha zvigadzirwa zvemazororo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Sekureva kwaBloomberg, kushomeka kwezvinhu zvinokanganisa kota yaifanirwa kuve rekodhi yeApple